ကျေးဇူးပြု၍ SEO Email SPAM အတွက်မကျပါစေနှင့် Martech Zone
ကျေးဇူးပြု၍ SEO Email SPAM အတွက်မကျပါနှင့်
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 16, 2014 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇန်နဝါရီ ၄၊ ၂၀၁၂ Douglas Karr
ရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒီအီးမေးလ်ကိုကြည့်ပြီးငါ့ကိုစိတ်ရှုပ်စေတယ် သို့သော်အတိတ်ကဖောက်သည်များက၎င်းတို့အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမပြုကြောင်းသိစေရန် SEO ကုမ္ပဏီမှတောင်းခံစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူတို့ကအဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုပို့ပြီးဘာကြောင့်လဲလို့မေးတယ်။
Mark Peterson မှ (maketopseorank@gmail.com) မှဖြစ်သည်။ [Gmail လား ဒါကြောင့်ဒီကောင်လေးဟာငါကြည့်လို့ရတဲ့ဒိုမိန်းရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်တကယ်အလုပ်မဖြစ်ဘူးလား။ maketopseorank? တကယ်လား?]
ဟယ်လို, [ဟိုင်းဘယ်သူလဲ ငါ့ကိုမသိဘူးလား?]
မင်းနေကောင်းပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုသုတေသန၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် [AKA - ကျွန်ုပ်တို့သည် site ပိုင်ရှင်များစာရင်းကိုဝယ်သည်။ ]ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏“ Marketingtechblog.com” ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုတွေ့ပြီးသင့် site သည် Google, Yahoo & Bing ကဲ့သို့သောအရေးကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များတွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ [ငါတို့ဘယ်နေရာမှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မထားသလဲ? ရာနဲ့ချီတဲ့စည်းကမ်းချက်များကိုအဆင့် ၁ သတ်မှတ်တယ်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုသင်အလွန်နည်းပါးသောကြောင့်စိတ်ဝင်စားပါ့မလား။ [ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော SEO သည်သင့်အားပိတ်ပင်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များအတွက်ပျက်စီးခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ]
သင့်လျော်သောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သင့်မြတ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အသိအမှတ်ပြုမှုကိုတိုးမြှင့်စေပြီးသင်၏ရောင်းအားကိုတိုးပွားစေလိမ့်မည်။ [ဟုတ်တယ် ... ပြီးတော့ငါ့ကိုမသိတဲ့သူ၊ ငါ့ site ကိုမသိတဲ့၊ ငါရာထူးကိုမသိတဲ့သူ၊ ငါဘာအဆင့်သတ်မှတ်ရမလဲမသိတဲ့သူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဘယ်တော့မှမစွန့်စားရဘူး။ ငါရောင်းနေတာကိုသိတယ်။ ]
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားကျွန်ုပ်တို့၏“ အမျိုးသား SEO” အထုပ်ဖြင့်သုံးလမှခြောက်လအတွင်း Google, Yahoo သို့မဟုတ် Bing တွင်ပထမနေရာချထားခြင်းကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ [အာမခံထားသလား? 1st စာမျက်နှာနေရာချထား? ငါဘာမှမအပေါ်ခေါင်းစဉ်ရေးသားနိုင်ပြီးအပေါ် 1st နေရာချထားရနိုင်သည် အချို့သော သက်တမ်း။ ] ၃ လမှ ၆ လသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ SEO package အားလုံးအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
သင်စိတ် ၀ င်စားသည်ကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကသင့်အားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပို့ပေးပါမည်၊ သို့မဟုတ်ဖုန်းခေါ်ရန်စီစဉ်နိုင်သည်။ အဲဒါသင့်ရွေးချယ်မှုပါပဲ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကိုချစ်လိမ့်မယ်!
ငါသည်သင်တို့၏ပြန်ကြားချက်မျှော်လင့်နေပါတယ်။ [ကြီးတယ် - ငါမင်းကိုဒီဘလော့ဂ်ပို့စ်မှာ link တစ်ခုပို့နေတယ်။ ]
Tags: အီးမေးလ်ကကွမ်းခြံကုန်းseoseo အီးမေးလ်ကိုတောင်းနိုင်အောင်seo လိမ်လည်မှုseo spamစပမ်း
Brand.net: တိကျသောပထဝီအနေအထားနှင့်ဒေတာဖြင့်မောင်းနှင်သော display ကြော်ငြာ
17:2014 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 8, 31
နောက်ထပ်အကြီးအ post ကို Doug! ဒါဟာတကယ်ကိုသိဖို့ကောင်းတယ်။ ဝေမျှလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
28:2015 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 26
ငါဖူးသမျှ client တစ်ခုချင်းစီကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးပို့ပေးတယ် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုဤလူများကိုလျစ်လျူရှုရန်အမြဲတစေပြောနေရခြင်းက ၀ မ်းနည်းစရာပင်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့အားဖောက်သည်များအဖြစ်ထားရှိရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုမထင်ဘဲ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ခလုတ်နှိပ်နေသည့် spam ဦး ထုပ်များဖြစ်သည်ဟုပြောခြင်း ကံကောင်းတာကငါသူတို့ကိုပြဖို့ဤကဲ့သို့သောပို့စ်များကိုငါပို့လိုက်တာကငါပြောနေတာသာမဟုတ်။
28:2015 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 3, 26